Oli Ndiro Yeorivhi - Dhizaini magazini
Ndiro Yeorivhi OLI, chinhu chinooneka minimalist chinhu, chakavezwa zvichienderana nebasa rayo, pfungwa yekuviga makomba anobva nekuda kwechimwe chinhu chaida. Iyo yakatevera kucherechedzwa kwemamiriro ezvinhu akasiyana siyana, kushata kwemakomba uye kudiwa kwekusimudzira runako rweorivhi. Semunhu ari maviri-chinangwa kurongedza, Oli akagadzirwa zvekuti kana akangovhura iyo inogona kusimbisa kushamisika chinhu. Iyo dhizaini yakafuridzirwa ne chimiro chemuorivhi uye nyore kwayo. Sarudzo ye porcelain ine chekuita nekukosha kwezvinhu zvacho pachako uye nekushandisa kwayo.
Zita rechirongwa : Oli, Vagadziri zita : Miguel Pinto Félix, Izita remutengi : MPFXDESIGN.
Ndiro Yeorivhi Miguel Pinto Félix Oli